उद्योगीलाई चुनाव लाग्यो, ढकाल र प्रधानमध्ये कसले मार्ला बाजी ? « Bikas Times
उद्योगीलाई चुनाव लाग्यो, ढकाल र प्रधानमध्ये कसले मार्ला बाजी ?
ढकाल समूहको पल्ला भारी रहेको निजी क्षेत्रमा चर्चा
काठमाडौं । तिहार सकिएसँगै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको चुनावी माहोल ह्वात्तै बढेको छ । प्यानलैसहित चुनावी प्रतिस्पर्धामा होमिएका वरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेदवारद्वय चन्द्र ढकाल र किशोर प्रधान देश दौडाहा सकेर आन्तरिक जोड घटाउमा लागेका छन् ।
निजी क्षेत्रको अग्रणी संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५४औं वार्षिक साधारणसभा तथा निर्वाचन मंसिर ११–१३ मा काठमाडौंमा हुँदैछ ।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष आगामी अधिवेशनबाट स्वतः अध्यक्ष हुने भएकाले वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई मुख्य पद ठानी चुनाव हुँदै छ । वर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा साधारणसभाबाट स्वतः अध्यक्ष हुँदैछन् ।
ढकाल प्यानलबाट बस्तुगत उपाध्यक्षमा उमेशलाल श्रेष्ठ, जिल्लानगर उपाध्यक्षमा गुणनिधि तिवारी र एशोसिएट उपाध्यक्षमा रामचन्द्र संघाईले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् भने प्रधान प्यानलबाट वस्तुगत उपाध्यक्षमा अन्जन श्रेष्ठ, जिल्ला नगर उपाध्यक्षमा दिनेश श्रेष्ठ र एशोसिएटमा सौरभ ज्योतिले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् ।
महासंघको नेतृत्व चयनमा पूर्व अध्यक्षहरु पनि सक्रियतापूर्वक लागेका छन् ।
निर्वाचनलाई लिएर पूर्व अध्यक्षहरु पनि विभाजित भएका छन् । ढकाललाई खुलारुपमा चण्डीराज ढकालले सघाएका छन् भने प्रधानलाई पशुपति मुरारको साथ छ । महासंघको आन्तरिक राजनीतिमा चण्डीराज ढकाल रणनीतिकार मानिन्छन् भने चुनावी प्रक्रियामा सफल देखिन्छन् ।
महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षका दुवै प्रत्यासीले निजी क्षेत्रको उन्नयनलाई आफ्नो प्राथमिकता रहने भन्दै चुनावी प्रचार गरिरहेका छन् । कोभिड महामारीले व्यवसाय क्षेत्रमा पारेका असर, सरकारसँग बढेको दूरी, लगानीको वातावरण तथा समन्वयलाई प्रमुख अजेण्डा बनाएका छन् ।
तर, बैंकिङ, पर्यटन तथा उत्पादनमूलक उद्योगहरुमा गरेको लगानी र समन्वयात्मक कार्यशैलीका कारण ढकाल समूहको पल्ला भारी रहेको निजी क्षेत्रमा चर्चा चलेको छ । ढकालले पनि महासंघकै इतिहासमा सबैभन्दा बढी मतान्तरले आफू विजयी हुने दाबी गरेका छन् ।
८ घण्टे भ्रमणका लागि चिनियाँ रक्षामन्त्री फेङ्हे काठमाडौंमा